हरेक व्यक्तिको शरीरमा कस्तो आभा मण्डल हुन्छ ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home स्वास्थ्य हरेक व्यक्तिको शरीरमा कस्तो आभा मण्डल हुन्छ ?
नकारात्मक र सकारात्मक आभा मण्डल
जुन मानिसहरुमा आफ्नो विचार र कर्मद्वारा नकारात्मक भएको छ । उनीहरुसँग बस्नु अथवा उनीहरुसँग भेटघाट गर्नाले मात्र पनि राम्रो मानिसको पनि राम्रो हुँदैन । हामी कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिसँग भेट्दा आत्मिक शान्तिको अनुभव गर्छौं भने कोहीसँग भेट्दा कति खेर छुटौं भन्ने लाग्छ । त्यस्तो हुनुको पछाडि उनीहरुमा धेरै नकारात्मक उर्जा हुन्छ । विशेष गरेर अपराधी र कुविचारहरु भएका मानिसको आभा मण्डल नकारात्मक अर्थात् कालो, धमिलो, गाढा नीलो रंगको हुन्छ । धेरै गाढा रातो रंग पनि नकारात्मक हुन्छ ।
यी तीन तरिकाले आभा मण्डललाई ठिक गर्न सकिन्छ
आफ्नो अगाडि धुनी जगाउनु
तपाइर्ंले प्रायः देख्नु भएको होला बाबाहरुले आफ्नो कुटीमा धुनी जगाएका हुन्छन् र त्यसलाई ताप्छन् । त्यसो गर्दा आभा मण्डल ठिक र शुद्ध हुन्छ । त्यो आभा मन्डललाई भौतिक रुपले ठिक गर्ने प्रक्रिया पनि हो । तपाईं आगो अगाडि ढाड फर्काएर बस्नुहोस् र केही समयको लागि ढाड सेक्नुहोस् । त्यस्तो कार्य कम्तिमा ४३ दिनसम्म गर्नुपर्छ । हामी कुनै मूर्तिको अघि आरती किन गर्छौं भन्ने कुरा धेरैलाई ज्ञान नहुन सक्छ । वास्तवमा आरती गर्ने व्यक्तिलाई नै आरतीको लाभ प्राप्त हुन्छ ।
पाँच मिनेटका लागि ध्यान
प्रतिदिन उचित स्थान र वातावरणमा आसन लगाएर पाँच मिनेटका लागि ध्यान गर्नुपर्छ । ध्यान गर्दा कुनै पनि प्रकारका अनावश्यक अथवा नकारात्मक विचारहरुलाई त्यागेर पूर्णरुपमा शान्त रहेर आफ्नो श्वासको आवागमनमा ध्यान दिनुपर्छ । तपाईंले त्यसलाई कम्तिमा ४३ दिनसम्म गर्नुपर्छ । यदि तपाईं ध्यान गर्न जान्नु हुन्न भने प्रार्थना गर्नुपर्छ ।
आभा मण्डल विभिन्न रंगका हुन्छन्
हरेक व्यक्तिको आभा मण्डल भिन्दा-भिन्दै रंगको हुन्छ । जसले उनीहरुको व्यक्तित्व, स्व्ाभाव र उनीहरुको अन्वेषणको बारेमा थाहा हुन्छ । जैन धर्ममा यसलाई लेश्या भनिन्छ । जैन धर्म अनुसार ६ प्रकारका लेश्याहरु हुन्छ । कृष्ण, नील एवं कपोतलाई अशुभ मानिन्छ भने तेज, पद्म एवं शुक्ललाई शुभ मानिन्छ । विशेष गरेर आभा मण्डल बैजनी, नीलो, हरियो, पहेंलो, रातो, सेतो र रंगका हुन्छन् । यी रंगहरु कहिल्यै एउटै स्थितिमा हुँदैनन् ।
घरको वास्तु सुधार्नुपर्छ
यदि घर नकारात्मक दिशा तिर छ अथवा घरमा नकारात्मक वस्तुहरु छन् भने यी समस्याहरुलाई टाढा राखेर घरको रंगरोगन परिर्वतन गर्नुपर्छ । घरमा पहेंलो, सेतो, गुलावी र हल्का नीलो रंगको उपयोग गर्नुपर्छ । तीनै रंगहरुका बस्त्र, पर्दा, तन्ना र तकियाको खोल आदि राख्नुपर्छ । घरलाई पूर्णरुपमा वास्तु अनुसार बनाउनु र सजाउनुपर्छ ।
यदि तपाईंको आभा मण्डल सही छ भने सबैकुरा सही हुन्छ । तपाईंको भाग्य, तपाईंको ग्रह, नक्षत्र र तपाईंको भविष्य सबैमा सुधार आउँछ । सही प्रकारको आभा मण्डलले जीवनको हरेक क्षेत्रमा सफलताले तपाईंको पाइला चुम्नेछ । जीवनमा त्यही व्यक्तिले धेरै प्रगति गर्छ । जसको आभा मण्डल शुद्ध र सशक्त हुन्छ ।